Wararka - Baaskiilada casriga ah ee e-baaskiilku waa isbeddelka suuqa
E-baaskiil smart waa isbeddelka suuqa
Horumarka degdega ah ee sayniska iyo tignoolajiyada, wax soo saarka ka xariifsan, fudud oo degdega ah ayaa noqday baahiyaha muhiimka ah ee nolol maalmeedka dadka. Alipay iyo Wechat Pay waxay sameeyaan isbeddel weyn oo dadka u keena nolol maalmeedka ku habboon. Waqtigan xaadirka ah, soo bixitaanka baaskiilada elektaroonigga ah ee caqliga leh ayaa xitaa si qoto dheer uga dhex jira quluubta dadka. Iyadoo e-baaskiilku uu leeyahay meelaynta wakhtiga dhabta ah, waxaa suurtogal ah in lagu xakameeyo e-bike iyada oo loo marayo APP iyada oo aan la keenin furaha marka aad baxayso. Markaad u soo dhawaato baaskiilka elektaroonigga ah, waxay xaqiijin kartaa kicinta, furida iyo hawlgallada taxanaha ah.
Nolol maalmeedka, gaadiidka ayaa aad muhiim u ah. Faafitaanka COVID-19 iyo ciriiriga taraafikada, baaskiillada labada lugood leh ee elektaroonigga ah waxay noqdeen habka la doorbido ee gaadiidka ee dadka ku socda baaskiillada elektaroonigga ah ee gaarka ah iyo safarka gaaban iyo kuwa dhexe. Baaskiilada smart-ka ee xariifka ah, kuwa badanna shaqeeya waxay noqdeen shuruud lagama maarmaan u ah dadku inay iibsadaan, dadkuna ma dooran doonaan habka dhaqameed ee dhibka badan ee isticmaalka sidii hore. Waxay qaadataa wakhti badan si aad u hesho furaha si aad u furto, oo xitaa illowdo inaad xirto e-bike, lumiso furaha, iyo helitaanka baaskiilka, taas oo kordhinaysa khatarta xatooyada hantida.
Waqtigan xaadirka ah, kaydka elektaroonigga ah ee labada lugood leh ee Shiinaha ayaa gaadhay 300 milyan. Soo bandhigida halbeegga cusub ee qaranka iyo kobcinta garaadka ayaa sidoo kale kiciyay mowjado cusub oo ah baaskiillada elektaroonigga ah ee labada lugood leh. Warshadaha waaweyn ayaa sidoo kale furay alaabo cusub marka loo eego sirdoonka alaabta. Wareega tartanka, oo si joogto ah u bilaabaya alaabooyin cusub oo shaqeynaya si looga faa'iidaysto fursadaha suuqa. Xitaa Master Lu wuxuu sidoo kale sameeyay qiimeyn caqli-gal ah ee baaskiillada elektaroonigga ah, buundooyinka orodka ee ku saleysan kala duwanaanshaha shaqooyinka caqliga leh. Ilaa xad, macaamiishu waxay tixraaci doonaan qiimaynta caqliga leh oo ay dooranayaan inay iibsadaan baabuurta, iyo heerka caqli-galnimada ayaa saamayn doonta suuqa.